PARMELIA: ISTICMAALKA IYO KA HORJEEDA, FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA, GURYAHA DAWOOYINKA IYO CALAAMADAHA LAGU DAAWEYNAYO. SIDA LOO SAMEEYO DECOCTION EE LICHEN - SOOSAARKA DALAGGA
Tilmaamaha Botanical iyo soo bandhigid of sifooyinka bogsiinta ee larmen Parmelia
Dhaqaatiirta Populist waxay yiraahdaan dabeecada waxay dadka siisaa wax walba oo loo baahan yahay si loo bogsado oo loo soo celiyo jirka.
Inta badan ujeeddo tan ujeeddo kala duwan, berry, xididdada ayaa loo isticmaalaa.
Laakiin waxay soo baxday in xataa xayawaanku ay dadka ka faa'iidaystaan.
Mid ka mid ah waa Parmelia, oo loo isticmaali karo wanaag.
Parmelia ama, sidoo kale waxaa loo yaqaanaa, jarida cawsku waa unug adag. Waa ururinta fangaska hoose iyo algae hoose. Warshaddan wax-soosaarku waa faaruus kacsan, oo cabbiraya saddex ilaa shan sentimitir. Waxay leedahay caleenta caleen, dhejisyada oo gaara ilaa 2 mm ballac. Dambe waa mid aad u qalafsan, oo ku raaxaysanaya cagaar mugdi ah ama bunni ah. Qeybta hoose ee qaybta hoose waxaa lagu daboolaa timaha yaryar oo leh midab cagaaran ama caddaan ah.
Noocaan noocan ah wuxuu ku koraa dhirta, ciidda iyo xataa dhagaxyada. Inta badan dhan, dhirta jecel yahay in ay noqdaan on jilif ee geed. Waa wax aan wax u dhimeynin ciidda, carrada, iyo xaaladaha cimilada.
Parmelia si fudud u dulqaadasho qabow, abaar, roob xoog leh. Badanaa dhirta loo qaybiyey abaaraha iyo buuraha. Aad u jecel qorraxda iyo kulaylka badan.
Qaybta Parmelia waxaa ku jira astaamaha lichen ee gaarka ah, lichenin, isolochenin iyo evenin. Muuqaal ka mid ah geedo waxtar leh waa in uu ka kooban antibiotics, taas oo ficilka ficilka ay aad u la mid ah tannin.
Propolis, miro, bocor, iyo caleemaha Manchurian ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa antibiyootig dabiici ah.
Tallus of this lichen waxaa lagu hodansiiyey qoyaan, karbohidrat, dufan, calcium, fosfooraska, ash iyo pigments kala duwan.
Ma taqaanaa? Maaddaama ay ka kooban tahay kiimikada, parmes wuu burburin karaa dhagaxyada.
Iska yaree cawska waa warshad waxtar u leh. Waxay leedahay ficil ballaaran oo ficil ah waxayna ka caawisaa in ay la dagaalanto cuduro kala duwan. Maanta, Fikradda Parmelia waxaa lagu daraa daawooyinka dhaqameed badan.
Soo saaridda geedkaan waxaa lagu dhajiyay guryaha bakteeriyada iyo bakteeriyada. Wuxuu nadiifiyaa oo nadiifiyaa jidhka bini'aadamka, wuxuu dilaa bakteeriyada jiran.
Geedaha sida dhoobada, geela, dhirta miraha, dhirta cad, koofiyado, kalendula, iyo rybyolist buur waxay leeyihiin waxyaalo liddi ku ah antiseptic.
Parmelia waxay awood u leedahay in ay si deg deg ah u joojiso dhiigbaxa, waxayna sidoo kale gacan ka geysataa bogsashada degdegga ah ee nabarrada iyo jarista.
Marka la kulay, lichen wuxuu leeyahay saameyn fiican oo saameynaya, wuxuu caawiyaa joojinta qufaca, duufaan ku yeesha sambabada.
Iska yaree cawska ayaa aad loo qiimeeyaa iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda ay u leedahay inay la dagaallanto qaaxada. Qaybaheeda ayaa halis u ah qaaxada bacilli, sidaa daraadeed dhakhtarradu inta badan waxay u qoraan daawooyinka leh lichen iyadoo la raacayo daroogooyinka aasaasiga ah.
Parmelia ee halabuurka daroogadu waxay xoojisaa muruqyada wadnaha iyo habka wadnaha. Kharashka ka yimaada khatarta wadnaha ee wadnaha iyo dhibaatooyinka kale ee wadnaha la yareeyo.
Ma taqaanaa? Iska yaree cawska ayaa lagu daaweeyay Masar hore.
Laga soo bilaabo waqtigeedii, parmelia waxaa loo isticmaalay sida ugu horeysa oo ah wakiilka farsamada.
Maanta, ku dhawaad ​​dhammaan hantida faa'iido leh ee warshadaan ayaa la ogaaday, meelo badan ayaa laga helay isticmaalka:
Dhakhaatiirtu waxay kugula talinayaan inay qaataan dib-u-hagaajin ay ku jiraan qufac adag, boronkiitada, tiibishada;
Baro sida loola dhaqmo cirbadaha, xididka gaduudka, caanaha lafdhabarta ah, juniper, coltsfoot, beero qoyan, lafdhabarta finanka ee qaaxada.
si loo daaweeyo dhibaatooyinka la xiriira mareenka caloosha iyo caadada guud ee xaaladdiisa, waxay sidoo kale kugula talinayaan faafidda iyo gooyooyinka cawska gooyay;
waxay awood u leedahay in ay kiciso mindhicirada iyo si wax ku ool ah u saameyn ku yeelato bay'ada gudaha.
Lichen ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa dibadda. Haddii ay dhacdo in cuncunka, nabarrada, xanaaqa, jarista iyo cudurrada maqaarka ee kala duwan, dhakhtarradu waxay qoraan cadar ay ku jirto parmelia. Waxay si fiican u saameeyaan infakshanka waxayna xajinayaan maqaarka, iyo sidoo kale wax ku biirinta bogsashada degdegga ah.
Waa muhiim! Decoctions iyo boomaatada Parmelia ma ahan daroogo madax-bannaan, tani waa wax dheeraad ah oo ku saabsan daaweynta uu dhakhtarku soo qoray.
Isticmaalka Parmelia waxaa lagu dhaqmaa daawada dadweynaha muddo dheer. Sababtoo ah liis weyn oo muhiim u ah unugyada muhiimka ah ee muhiimka ah, lichen waa mid aad u faa'iido leh jirka bini'aadamka. Waxaa loo adeegsan karaa gudaha ama dibadda.
Inta badan dhakhaatiirta dadku waxay kugula taliyaan daawadan:
wadnaha oo daciif ah iyo weelasha;
xanuunada caloosha iyo mindhicirka;
gubasho ama qaboojiyaha xagjirnimada.
Maraqyada iyo tinctures ee lichen si fiican u cusbooneysiin iyo kicin jirka ah, ku dhaqma on iyada oo adag.
Lichen waxaa la goostay Abriil ama Maajo: waqtigaan waa mid aad u badan oo ku jira xubno waxtar leh. Waxaa lagama maarmaan ah in la ururiyo oo kaliya oo ay ka nadiifiso haraadiga qoryaha. Caadi ahaan qalliinkaan waxaa lagu sameeyaa mindi.
Marka xigta, massku waa la qalajiyaa qorraxda meel fiican oo hawo leh ama waddada. Ka dib qalajinta, waxaa la dhigayaa weel kasta oo suurtogal ah: waxay noqon kartaa dhalooyinka, bacaha ama sanduuqyada. Warshad caafimaad leh ayaa lagu kaydin karaa ilaa afar sano iyada oo aan lumin hantidooda faa'iido leh.
Waxyeellada iyo waxyeelada dhinaca kale
Daawooyinka ku habboon oo la aqbali karo, lichen waa wax aan waxyeello lahayn. Hase yeeshee, haddii aad qaadatid wax badan ama aadan nasasho u dhaxeynin koorsooyinka daaweynta, waxaa laga yaabaa in guska parmelia uu dhaco. Tani waxay muujinaysaa lallabbo iyo matag.
Sidoo kale waa mid u qalantaa in la xusuusto in dadka xasaasiyadda ah ee dhirta ay sababi karaan weerarada ugu xooggan ee cudurka. Xilliga xad-dhaafka, waxaa sidoo kale jira tabar-dari iyo dawakh.
Parmelia waa mamnuuc haweenka uurka leh iyo hooyooyinka kalkaaliyaha ah.
Sidoo kale hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ayaa sidoo kale mamnuuc ah dabacsanaan, marwaxaa, saffron, jecelyahay, qadhaadhka qadhaadhka ah, duufaan.
Dadka intiisa kale waxay cabbaan maraqyada, tincture of lichen waa in taxadar weyn, tan qiyaasta xad-dhaaf ah u horseedaa suntan.
Cadaadiska sare ee laguma talinayo in aad qaadato daawooyinka cawska la gooyey. Tani waxay sababi kartaa weerar lagu qaado dhiig-karka. Aad bay muhiim u tahay in si taxadar leh loola socdo jawaabta jidhka ee parmelia. Cudurka qoyaanka, kaasoo ah alerjiga ugu xoogan, wuxuu ku jiraa qeyb ka mid ah fiiqida.
Waa muhiim! Ka hor intaanad bilaabin qaadashada mukhadaraad ay ku jiraan fayraskan, waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga. Kaliya wuxuu si sax ah u xisaabin karaa qiyaasta ugu badan ee la siin karo ee parmelia.
Decoction Parmelia: sida loo soo dhajiyo
Decoction Lichen waa qaabka ugu badan ee loo qaato. Diyaarinta badeecada noocan oo kale ah waa mid sahlan.
5 qaado shaah ah parmelia;
0.5 litir oo biyo ah.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa inay qasaan oo kariyaan 10 daqiiqo karkarinta. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ka tagto decoction laba saacadood si aad u degto. Cab cabitaanka saafiga ah ee aad u baahan tahay saddex goor maalintii maalintiiba. Waxaa lagu talinayaa in la qaato cunto ka hor.
Ku kaydi sida decoction sida waa in aan ka badan laba maalmood qaboojiyaha, ka dibna ay lumiso hantida faa'iido leh.
Daawadan waxaa lagula talinayaa in ay kor u qaaddo waxqabadka iyo xaalada mindhicirka, ka horjeeda caloosha, daaweynta qufaca iyo wakiilka xoojinta.
Waxaa soo baxday in feerka caadiga ah uu noqon karo mid aad u faa'iido leh jirka bini'aadamka. Waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxyaabaha ku saabsan iyo sida loo fahmo sida loo saxo oo loo isticmaalo. Iyada oo isticmaalkeeda habboon iyo mid dhexdhexaad ah, shaki kuma jiri doono inaad ka badbaadiso dhibaatooyin badan.